Taliyihii Nabad sugida Woyanaha ee Dangila oo Toogasho lagu dilay. | ogaden24
Taliyihii Nabad sugida Woyanaha ee Dangila oo Toogasho lagu dilay.
Taliyihii Labaad ee katirsan ciidamada Nabad sugida Woyanaha ayaa mudo 3-maalmood Gudahood ah waxaa lagu Fuliyay dil Toogasha ah oo ay Gaysanayaan koox dhalinyara ah oo ku Hubaysan Bastooldo.
Sida xogta aan kuhelay sargaalka ladilay oo lagu magacaabi jiray Yargal Abaje ayaa Taliyaha magaalada Dangila ee maamulka Amxarada, waxaana uu kamid ahaa Abaje shakhsiyaadka ugu Naxariista daran uguna Akhlaaq xun Taliyayaasha Woyanaha ee kusugan magaaladaasi iyo nawaaxigeeda.
Dadwaynaha magaalada Dangila ayaa aad ugu Farxay dilka khaarajinta ah ee lagu Fuliyay Taliye Abaje oo dhibaato badan kuhayay, sida dil sharci-dara ah Kufsi xadhig wadareed iyo xad Gudubyo kale oo aysan jirin cid kula xisaabtanta.
Toogashadani mid lamid ah ayaa 2-maalmood kahor waxaa isna Lagu Khaarajiyay Taliyihii ciidanka Nabad sugida Woyanaha ee Gobolka Wallega oo safka Hore kaga Jiray saraakiisha xasuuqa bahalnimada ah kawada Gobolkaasi oo kamid ah meelaha kacdoonka xoogan ee Woyanaha lagu diidan yahay uu kasocdo.